Hitsy toraka | NewsMada
Tsy mahaleo ny sarany
Ny ezaka rehetra tokony hisy valiny avokoa. Rariny tanteraka izany satria lasa manao eza-maina fotsiny ny ekipa iray na ny atleta, raha toa ka tsy mahazo izany sitraka izany. Raha ho an’ny eto Madagasikara aloha, tsy mbola hita taratra loatra izany, eo amin’ny ankamaroan’ireo federasiona.
Matetika mantsy tsy mahaleo ny sarany ny vidiny. Amboara kely ny hany mba azon’ny ekipa tompondaka na ireo atleta nahavita dingana goavana. Ny vola sy ny fotoana lanin’izy ireo tamin’ny fanomanana nefa midangana be.
Betsaka no kivy saingy tsy afa-manoatra. Efa natao ilay fifaninanana dia raisina izay hatolotra. Ny an’ny federasiona sasany aza, tsy misy fankasitrahana fa miandry ny fitondrana sy ny minisitera hatrany. Mampalahelo satria toa tsy tsapan’ireo tomponandraikitra, ny hasasaran’ireo atleta.
Lelavola sy amboara toy ny efa mahazatra ny hany tena andrasan’ny ankamaroan’ny atleta, nahavita vokatra tsara aorian’ny fifaninanana. Matetika anefa amboara kely ny hany mba ho fisaorana azy ireo. Tsy mahaleo ny sarany ny vidiny. Tokony hatao vola amin’izay ny fankasitrahana, fa izany no hetahetan’ny rehetra.